Madaxweyne Biden oo si adag u beeniyay Warar lagu faafiyay Warbaahino waa weyn | Allbanaadir.com
Home NEWS Madaxweyne Biden oo si adag u beeniyay Warar lagu faafiyay Warbaahino waa...
Madaxweyne Biden oo si adag u beeniyay Warar lagu faafiyay Warbaahino waa weyn
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa si adag u beeniyay warar ay warbaahinta caalamka qaarkood baahiyeen oo ku aadanaa in laga diiday codsi uu u diray Madaxweynaha dalka Shiinaha oo ku aadanaa in kulan toos ah yeeshaan.
Warbaahinta caalamka qaarkood ayaa qoray in wadahadal dhinaca telfoonka oo dhax maray Madaxweyne Joi Biden iyo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isku fahmi waayeen in kulan toos ah yeeshaan uuna ka biyo diiday Jinping oo marka hore codsaday in Mareykanka wax ka bedelo siyaasadiisa Shiinaha ku wajahan.
Madaxweyne Joi Biden oo Wariyaal la kulmay wax ka weediiyeen warkan la baahiyay ayaa sheegay in warkaasi uusan jirin , waxa uuna hadalkiisa kusoo koobay ” run maahan warkaasi”
La-taliyaha amniga qaranka ee Madaxweynaha Mareykanka Jake Sullivan, ayaa dhankiisa beeniyay warka laga faafiyay wadahadalka dhinaca telfoonka ah ee dhax maray Madaxda dalalka Mareykanka iyo Shiinaha.
Dowlada Shiinaha ayaana wax war ah kasoo saarin warkan la baahiyay ee ku aadan in Madaxweyne Xi Jinping ka biyo diiday in kulan fool ka fool ah la qaato dhigiisa dalka Mareykanka Joi Biden.
Previous articleLacag ku dhaw 1 Milyan Dollar oo ku baxday Doorashada kursigii uu ku guuleestay Muuse Suudi
Next articleMaxkamada Ciidamada oo Xukun ku riday Rag magaca Al Shabaab dadka ku baadi jiray (Sawirro)